यी हुन् नारीका चार रुप - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यी हुन् नारीका चार रुप
एमालेको सदस्य बन्न परीक्षा सुरु
रत्ननगर । नेकपा एमाले चितवनले जिल्लास्तरमा पहिलोपटक पार्टी सदस्यता लिनका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको छ […]
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, के– के छ एजेण्डा?
विवादित धेरै विषयमा छलफल माघ ११ । काठमाडौं,क्रियाशील सदस्यताको विषय र जिल्ला सभापति पुनस् उम्मेदवार हुन […]
‘म प्रधानमन्त्री हुँदा’ पुस्तक लोकापर्ण
काठमाडौँ १४ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएका मुख्य सम्बोधनको […]
नेविसंघ : कति उमेरसम्मले विद्यार्थी नेता बन्न पाउने ?
काठमाडौं । कति उमेरसम्मले विद्यार्थी नेता बन्न पाउने ? नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा […]
‘ब्रिज द ग्याप’को दसैं धमाका, इन्दिरा र मनोजले सिड्नी तताउने
सिड्नी, ब्रिज द ग्याप नेपालले सिड्नीमा वृहत् ‘दसैं साँझ’ मनाउने भएको छ । स्टेज क्वीनको उपाधि पाएकी गायिका […]